Surely Booska Farshaxanku - Joornaalka Naqshadeynta
Booska Farshaxanku Tani waa farshaxanimo, cashuur la'aan iyo tafaariiqle oo dhammaantood isu gayn kara hal meel. Tan iyo dhismayaasha in ay tahay warshad dharka ka shaqeysa oo dalka ka shaqeysa. Dhismaha oo dhami wuxuu xajistaa darbiga jaban ee darbiga, sida lakabka lakabka ah, wuxuu abuuraa isbarbardhig ka duwan kan banaanka, wuxuu kaloo abuuraa waayo-aragnimo boos. Abandon qurxin aad u adag, wuxuu adeegsaday qurxin jilicsan oo muuqaal ah taasoo abuurtay dareen dabacsan. Farqiga u dhexeeya abuurista iyo marxaladda hore waa mid ka sii dabacsan horumarka waara mustaqbalka.
Magaca mashruuca : Surely, Magaca naqshadeeyayaasha : Michael Lam, Magaca macmiilka : Surely.
Booska Farshaxanku Michael Lam Surely